How I learnedaLanguage in 90 days | J-Myanmar
phyo — Mar 18, 2015
ဘာသာ​စကား​နှစ်​မျိုး တတ်မြောက်​ခြင်း​သည် ကွဲပြား​ခြား​နား​သော လူ​အမျိုး​မျိုး၊ ယဉ်ကျေး​မှု​အမျိုး​မျိုး​နှင့် စိတ်​ခံစား​ချက်​အမျိုး​မျိုး​တို့​ပါရှိ​သော ကမ္ဘာ​အသစ်​တစ်​ခု​ကို သွား​ရောက်​ရန် သင့်​ကို လမ်း​ဖွင့်​ပေး​မှာ​ပါ။ ဒီ​လို​တတ်မြောက်​ဖို့​ကို အချိန်​တွေ​လည်း အများ​ကြီး​ပေး​ဆပ်​ရ​ကောင်း ပေး​ဆပ်​ရ​မှာ​ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူ​အများ​စု​ကတော့ ဒီ​လောက်​များပြား​လှ​တဲ့ အချိန်​တွေ​ကို မ​ပေး​နိုင်​ကြ​ပါ​ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီ​လို​တတ်​ကျွမ်း​ဖို့​က ရက် (၉​၀) တည်း ကြာ​တယ်​ဆို​ရင်​ရော ဘယ်​လို​လဲ?
ပထမ​ဆုံး ဘာသာ​စကား (၂) မျိုး တတ်မြောက်​ခြင်း​၏ အကျိုး​ကျေးဇူး​များ​ကို သုံးသပ်​ကြည့်​ရအောင်
ဒုတိယ​ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​တဲ့​အတွက် သိသာ​ထင်ရှား​လှ​တဲ့ အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ဥပမာ – အယ်(လ)ဇိုင်း​မား​ရောဂါ​ဖြစ်ပေါ်​မှု​ကို နှောင့်နှေး​စေ​ခြင်း၊ ဦးနှောက်​ရဲ့ စွမ်းအား​ကို မြှင့်​တင်​ပေး​ခြင်း၊ အာရုံ​စိုက်​နိုင်​စွမ်း ပို​ကောင်း​စေ​ခြင်း​နဲ့ အာရုံ​အနှောင့်​အယှက်​ဖြစ်ပေါ်​စေ​တဲ့ အရာ​များ​ကို​တောင်​မှ ဖယ်ရှား​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​သိသာ​တဲ့ အကျိုး​သက်ရောက်​မှု​တွေ​အပြင် လူ​မှု​ရေး​ဆိုင်​ရာ​အကျိုး​ကျေးဇူး​တွေ အမြောက်​အများ​ကို​လည်း​ရ​ရှိ​စေ​ပါ​တယ်။ အနည်း​ဆုံး​တော့ စား​သောက်​ဆိုင်​တစ်​ဆိုင်​မှာ စာ​ပွဲ​ထိုး​ရဲ့ ဘာသာ​စကား​နဲ့ အစားအသောက်​မှာ​နိုင်​ခြင်း၊ ဓာတ်​လှေကား​ထဲ​မှာ သူ​များ ပြော​တာ​တွေ​ကို ခိုး​နားထောင်​ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ၎င်း​ဘာသာ​စကား​ကို မိ​ခင်​ဘာသာ​စကား​အဖြစ် ပြော​သူ​တွေ​နဲ့ စကားပြော​နိုင်​ပြီး သူ​တို့​ပြော​တာ​တွေ​ကို​လည်း နားလည်​နိုင်​ခြင်း​ကြောင့် စိတ်​ချမ်း​မြေ့ပျော်​ရွှင်​မှု ရ​ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ်။
ဒုတိယ​ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​တတ်မြောက်​ခြင်း​ရဲ့ အကောင်း​ဆုံး​သော ရ​လာဒ်​ကတော့ နောက်ထပ် တတိယ၊ စတုတ္ထ (သို့) ပဥ္စ​မ​ဘာသာ​စကား သင်​ယူ​တဲ့​အခါ​မှာ ပို​ပြီး လွယ်ကူ​သွား​ခြင်း​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​ခြင်း​သည် စိန်ခေါ်​မှု မဟုတ်​ပါ။ ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ကို ဘယ်​လို​သင်​ယူ​ရ​မ​လဲဆို​တာ ကို သင်​ယူ​ခြင်း​က​သာ စိန်ခေါ်​မှု​ဖြစ်​ပါ​သည်။ နည်း​လမ်း​တွေ​ကို သိ​ပြီ​ဆို​တာ​နဲ့ တတ်​သွား​တဲ့ သဒ္ဒါ​ပုံစံ​တွေ​နဲ့ ဘာသာ​စကား​ဆိုင်​ရာ နည်း​ပညာ​တွေ​ကို မိမိ သင်​ယူ​တဲ့ ဘာသာ​စကား​တိုင်း​မှာ အသုံး​ချ​နိုင်​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဘာသာ​စကား​သင်​ယူ​ခြင်း​နှင့်​ပတ်သက်​၍ လူ​အများ​စု​ထင်​တာ မှား​နေ​ရ​တဲ့​အကြောင်းရင်း တစ်​ခု​ရှိ​ပါ​တယ်။
ကျွန်တော့်​အနေ​နဲ့ အထက်​တန်း​ကျောင်း​မှာ စ​ပိန်​ဘာသာ​စကား​ကို နှစ်​ပေါင်း​အတော်​ကြာ​ကြာ သင်​ခဲ့​ရ​ပြီး၊ အစိုးရ​စာ​မေး​ပွဲ​တွေ​မှာ​တောင် အဆင့်​ကောင်း⁠ကောင်း​ရ​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်​နေ့​ကျ​တော့ တကယ်​ပဲ စ​ပိန်​စကား​ကို လက်တွေ့​ပြော​ရ​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ ကျွန်တော် သဘောပေါက်​သွား​ပါ​တယ်။ အထက်​တန်း ကျောင်း​မှာ စ​ပိန်​စကား​ကို (၄)နှစ်​တာ သင်​ယူခဲ့​တာ​တောင်​မှ burrito (မက်​ဆီ​ကို ချာ​ပါ​တီ​တစ်​မျိုး)ကို မ​မှာ​တတ်​သေး​တာ​ကို တွေ့​ရ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ဆို​ရင် ဘယ်​နေရာ​မှာ မှား​သွား​သလဲ? တရားဝင် စံ​သတ်​မှတ်ထား​တဲ့ စာ​မေး​ပွဲ​တွေ​အရ​တော့ ကျွန်တော်ဟာ စ​ပိန်​ဘာသာ​ကျွမ်းကျင်​သူ​တစ်​ယောက်​ပါ​ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့​မှာ​ကျ​တော့ ကျွန်တော့်​အနေ​နဲ့ အစားအသောက်​မှာ​ခြင်း​ဆို​တဲ့ အခြေ​ခံ​အကျ​ဆုံး​လုပ်​ငန်း​လေး​ကို​တောင်​မှ မ​လုပ်​နိုင်​ခဲ့​ပါ​ဘူး။
အကြောင်း​ကတော့ ကျွန်တော်​တို့​ဟာ ဘာသာ​စကား​ကို သင့်တော်​တဲ့​ပုံစံ​နဲ့ အသင်​မ​ခံ​ခဲ့​ရ​လို့​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ကျောင်းသား​တွေ​ဟာ အုပ်စု​လိုက် ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​ကြ​ပြီး လေ့ကျင့်​ခန်း​စာ​ရွက်​အချို့ (worksheets)နဲ့ သဒ္ဒါ​လေ့ကျင့်​ခန်း​အချို့​ကို လုပ်​နိုင်​ရင်​ပဲ ဘာသာ​စကား​သင်​ယူ​မှု​ဟာ လုံလောက်​တယ်​လို့ ထင်​ကြ​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့​လည်း ဘယ်​သူ​တစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​မှ စကားပြော​ကို ကျွမ်း​ကျွမ်းကျင်​ကျင် မတတ်​ခဲ့​ကြ​ပါ​ဘူး။ တကယ်​တမ်း​ကျ​တော့ လေ့ကျင့် ခန်း​စာ​ရွက်​တွေ(workheets)တွေ​ကို ဖြေ​ဆို​ခြင်း​သည် ထို​လုပ်​ငန်း​အတွက်​ပဲ လေ့ကျင့်​နေ​တာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒါ​ကတော့ worksheets တွေ​ကို ဖြေ​ဆို​တဲ့ အလုပ်​ပါ​ပဲ။ ဒါပေမဲ့ စကားပြော​ကို သင်​ယူ​ချင်​ရင်​တော့ စကားပြော​ခြင်း​ဖြင့် လေ့ကျင့်​ရ​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဒါ​ကြောင့် လူ​တွေ​က စာအုပ်​က​တစ်​ဆင့်​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် (သို့) ကွန်​ပျူ့​တာ program တစ်​ခု နဲ့​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ရဲ့ စကားပြော​ကို သင်​ယူ​တဲ့​အခါ ဒီ​နည်း​နဲ့​သာ သူ​တို့ သင်​ယူ​နေ​ရင် မျှော်​မှန်း​တဲ့ ရည်​ရွယ်​ချက်​ဖြစ်လာ​မှာ မဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု⁠ခု​ကို ပြော​ချင်​ရင် စကားပြော ခြင်း​ကို လေ့ကျင့်​ရ​ပါ​မယ်။ ဒါ့​အပြင် ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ကို သွက်သွက်​ကလေး​ပြော​ချင်​ရင် အခု​ကတည်းက စ​ပြီး ပြော​ရ​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ အများ​ကြီး​ကို ပြော​ရ​မှာ​လည်း ဖြစ်​ပါ​သည်။
ဘာသာ​စကား​ကို လျင်မြန်​စွာ သင်​ယူ​နိုင်​သည့် အခြေ​ခံ​နည်း​ပရိယာယ်​တစ်​ချို့​ကို လေ့​လာ​ကြည့်​ရအောင်
ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ကို သင်​ယူ​ခြင်း​ဟာ လန့်​စရာ​ကောင်း​တယ်​လို့ ထင်​ရ​ပါ​တယ်။ ဒါ​ကြောင့် အသေး​စိတ် မ​ဆွေးနွေး​ခင် ယေဘုယျ​နည်း​ပရိယာယ်​တွေ​ကို ခြုံ​ငုံ​၍ တင်ပြ​ပါ​မယ်။
အချက်အလက်​တွေ​ကတော့ အောက်ဖော်​ပြ​ပါ အတိုင်း​ပဲ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
1. သင်​ယူ​မှု​အတွက် သင့်တော်​သော မှီ​ငြမ်း​ကိုး​ကား​စရာ စာအုပ်​စာ​တမ်း၊ DVD၊ ရုပ်​ရှင်၊ CD စ​သည်​တို့​ကို ရ​ယူ​ပါ။
အဲ​ဒါ​တွေ​ကတော့ သဒ္ဒါ​စာအုပ်​ကောင်း​ကောင်း၊ အဘိဓာန်​ကောင်း​ကောင်း၊ အသံ​ထွက် CD နဲ့ ရုပ်​ရှင်​တွေ၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ်​တွေ​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
2. သီး​သန့် ဆရာ​တစ်​ယောက် ငှား​ပါ။
ဆရာ​ကို အနည်း​ဆုံး တစ်​လ​လောက်​တော့ လို​ပါ​လိမ့်​မယ်။ တစ်​နေ့​ကို (၄)နာရီ သင်​ယူ​ဖို့ ကျွန်တော် အကြံ​ပြု​ချင်​ပါ​တယ်။
3. တတ်နိုင်​သ​မျှ ၎င်း​ဘာသာ​စကား​နဲ့​ပဲ တွေး​ပါ၊ ပြော​ပါ။
စကားလုံး​တစ်​လုံး​ကို မ​မှတ်မိ​တိုင်း ၎င်း​ကို ဝေါဟာရ​မှတ်စု စာအုပ်​ထဲ​ကို ထည့်​လိုက်​ပါ။ ဝေါဟာရ​တွေ​ကို နေ့စဉ်​လေ့ကျင့်​ပါ။
4. သူငယ်ချင်း​များ၊ ဘာသာ​စကား​ပြောဖော်၊ ၎င်း​ဘာသာ​စကား​ကို ပြော​သော အခြား​သူ​များ​ကို ရှာ​ပါ။
ဆရာ​နဲ့ အခြေ​ခံ​ဘာသာ​စကား​ကို ပြော​နိုင်​ပြီ​ဆို​ရင် တခြား​စကား​ပြောဖော်​များ လို​လာ​ပါ​ပြီ။ မ​ရ​သေး​ဘူး​ဆို​ရင် ၎င်း​ဘာသာ​စကားပြော​တိုင်း​ပြည်​ကို​သွား​ဖို့ စဉ်းစား​ပါ။ လူ​အများ​တက်​တဲ့ သင်​တန်း ကို စဉ်းစား​ပါ။ အဆက်​မ​ပြတ်​လေ့ကျင့်​ပါ။
ဒါ​တွေ​ကတော့ အခြေ​ခံ​ကျ​တဲ့ နည်း​ပရိယာယ်​တွေ​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒီ​နည်း​ပရိယာယ်​တွေ​ကတော့ ပြင်းထန်​ပါ​တယ်။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ (၃)လ​အတွင်း ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ကို သင်​ယူ​ရ​တာ​က မလွယ်​လို့​ပါ​ပဲ။ အကယ်၍ အဲ​ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို (၃)လ​ထက်​ပို​ပြီး ဖြည်း⁠ဖြည်း​ပဲ သင်​ယူ​လို​တယ် (သို့) နိုင်ငံ​အသစ်​ကို သွား​ပြီး တစ်​နေ့​ကို (၄-၈)နာရီ​လေ့ကျင့်​ဖို့ မ​လုပ်​နိုင်​ရင်​တော့ ဒီ​အစီ​အစဉ်​ကို ပြုပြင် ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။ နေ့​တိုင်း လေ့ကျင့်​ဖို့​ကတော့ လွန်စွာ​မှ အရေးကြီး​ပါ​တယ်။ တစ်​ပတ်​တစ်​ကြိမ် နှစ်​ကြိမ် ထက် တစ်​နေ့​ကို မိ​နစ် (၂​၀)လေ့ကျင့်​တာ​က ပို​ကောင်း​ပါ​တယ်။
ဘာသာ​စကား​သင်​ယူ​ရန် ရက် (၉​၀) အစီ​အစဉ်
ရက်​ပေါင်း(၉​၀)တည်း​နဲ့ စကားပြော​တဲ့​အခါ ချောမွေ့​သွက်​လက်​မှု​ရ​ကောင်း ရ​ရှိ​နိုင်​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ဒါ​မှ မဟုတ် စကားပြော​နိုင်​တဲ့ အဆင့်​မြင့်​ကောင်း​မြင့်​လာ​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်း​အထန် အာရုံ​စိုက်​ဖို့​တော့ လို​ပါ​တယ်။ ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု​ကို သင်​ယူ​ဖို့​အချိန်​ပြည့် အာရုံ​မ​စိုက်​နိုင်​ရင်​လည်း ကိစ္စ​တော့ မ​ရှိ​ပါ။ သို့သော်​လည်း သင်​ယူ​ခြင်း အစီ​အစဉ်​ဟာ ရက်(၉​၀)ထက် ပို​ကြာ​သွား​ပါ​မယ်။ နေ့​တိုင်း​လေ့ကျင့်​ဖို့ မ​မေ့​ပါ​နဲ့။ သို့မဟုတ် သင် တတ်​ထား​တာ​တွေ​ဟာ လျင်မြန်​စွာ ပျောက်​ကွယ်​သွား​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ပထမ ရက် (၃​၀)
ဘာသာ​စကား​တစ်​ခု သင်​ယူ​တဲ့​အခါ ပထမ​ရက် (၃​၀)က အလွန်​အရေးကြီး​ပါ​တယ်။ စိတ်​ကို ဒီ​သင်​ယူ​မှု​အထဲ​မှာ ပဲ အတတ်​နိုင်​ဆုံး အပြည့်​အဝ နှစ်​မြှုပ်​ထား​ဖို့ လို​အပ်​ပါ​တယ်။ ရက်(၉​၀)အတွင်း​မှာ ဒီ​ဘာသာ စကား​ကို သင်​ယူ တတ်မြောက်​ချင်​ရင်​တော့ ဒီ​ဘာသာ​စကားပြော​တဲ့ တိုင်း​ပြည်​ကို သွား​ဖို့ ကျွန်တော် အထူး​တိုက်တွန်း လို​ပါ​တယ်။ ဒီ​လို​သွား​ခြင်း​ဖြင့် သင့်​အနေ​နဲ့ ဘာသာ​စကား​ကို မ​ဖြစ်​မ​နေ သင်​ယူ​ရ​မယ်​ဆို​တဲ့ တိ​ကျ​တဲ့ အတွေး​ကို ဖြစ်ပေါ်​စေ​မှာ​ဖြစ်​ပြီး သင့်​ပတ်ဝန်းကျင်​ဟာ​လည်း ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို​ပဲ ပြော​တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်​သွား​မှာ​ပါ။ အကယ်၍ အဲ​ဒီ​ဘာသာ​စကားပြော​တဲ့ နိုင်ငံ​ကို သွား​နိုင်​ခဲ့​မယ်​ဆို​ရင် သင့်​ကို လက်ခံ​မဲ့ အိမ်ရှင် မိသား​စု (host family)တစ်​ခု⁠ခု​နဲ့ နေ​နိုင်​အောင် ကြိုးစား​ပါ။ ဒီ​မိသား​စု​နဲ့ ထမင်း​လက်စုံစား​ခြင်း​နဲ့ အများ​ကြီး သင်​ယူ​နိုင်​ပါ​တယ်။
ဘယ်​လို​ပဲ​ဖြစ်⁠ဖြစ်​ပါ – ပထမ​လ​ကတော့ ဆရာ​နဲ့ တစ်​ယောက်​ချင်း​သင်​ပါ။ လူ​အများ​တက်​တဲ့ သင်​တန်း​ကို လိုက်​မ​တက်​ပါ​နဲ့။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ ဆရာ​ကတော့ သင့်​ကို သင်​ယူ​ဖို့​အတင်းအဓမ္မ တိုက် တွန်း​မှာ ဖြစ်​ပြီး သင်​တန်း ဆို​ရင်​တော့ ခို​နိုင်​တယ်၊ အပျင်း​ထူ​လို့​ရ​နိုင်​တယ်။
အခု​ပြော​မဲ့ အချက်​က​လည်း အရေးကြီး​ပါ​တယ်။ ဘာသာ​စကား​ကို သင်​ယူ​တဲ့​အခါ​မှာ ကိုယ်တိုင်​က နိုးကြား​ထကြွ​ပြီး ပါဝင်​ပတ်သက်​တဲ့ သင်​ယူ​သူ (active learner) ဖြစ်​ရ​ပါ​မယ်။ လူ​အများ​စု​ဟာ ဘာသာ စကား​ကို အသင်​တော့​ခံ​ကြ​ပါ​တယ်။ ဒါပေမဲ့ မေးခွန်း​တွေ မေး​ခြင်း​ဖြင့် ကိုယ်တိုင် က​လည်း တက်တက်​ကြွ⁠ကြွ​နဲ့ ပါဝင်​ပတ်သက်​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။
ဆရာ​နဲ့​တစ်​ယောက်​ချင်း​သင်​ယူ​တဲ့​အခါ​မှာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ကိုယ့်​တစ်​ယောက်​တည်း လေ့ကျင့်​တဲ့​အခါ​မှာ​ပဲ ဖြစ်​ဖြစ် မ​သိ​သေး​တဲ့ စကားလုံး​တွေ၊ စကား​စု​တွေ​ကို အများ​ကြီး​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။ ဒီ​စကားလုံး (သို့) စကား​စု​တွေ​ကို ဝေါဟာရ / စကား​စု စာအုပ်​ထဲ​မှာ ရေးမှတ်​ထား​ပါ။
တစ်​နေ့​ကို ဝေါဟာရ​နဲ့ စကား​စု အခု ၃​၀ ကို စတင်​ကျက်​မှတ်​ဖို့ လို​ပါ​ပြီ။ ဘာ့​ကြောင့် အလုံး(၃​၀)ကို ကျက်​ရ​ပါ​သလဲ? ဒီ​လို​ကျက်​မှတ်​ပါ​က ရက်​ပေါင်း (၉​၀) ပြည့်​တဲ့​အခါ သင်​လို​အပ်​တဲ့ ဝေါဟာရ​နဲ့ စကား​စု​များ ရဲ့ ၈​၀%ကို တတ်မြောက် သွား​မှာ ဖြစ်​လို့​ပါ​ပဲ။
(၃​၁) ရက်​မှ ရက် (၆​၀)
ပထမ​လ​ပြီး​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ ကိုယ့်ကို​ကိုယ် ဒီ​ဘာသာ​စကား​နဲ့ ထိ​တွေ့​မှု​ရှိ​နိုင်​သ​လောက်​ရှိ​ဖို့ ကြိုးစား အားထုတ်​ရ​ပါ​တော့​မယ်။ ဆရာ​နဲ့ တစ်​ယောက်​ချင်း တစ်​လ​သင်​ယူ​ပြီး​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့​အတွက် သင့်​အနေ​ဖြင့် အခြေ​ခံ စကားပြော​ခြင်း​ကို​တော့ ပြော​နိုင် မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ဆရာ​နဲ့ သင်​ရ​တာ​က အကုန်အကျ​များ​လာ​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ဒီ​အချိန်​မှာ အဆင့်​မြင့်​သင်​တန်း​တက်​ဖို့ စဉ်းစား​သင့်​ပါ​ပြီ။ ငွေ​ကုန်​သက်သာ​စေ​တဲ့ အပြင် ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို ပြော​တဲ့​အခြား​သူ​တွေ​နဲ့​လည်း လက်လှမ်း မှီ​တဲ့ အနေအထား​ကို ရောက်​သွား​ပါ​တယ်။ သင့်​မိ​ခင်​ဘာသာ​စကား​ကို မ​ပြော​မိ​ဖို့​တော့ သတိထား​ရ​ပါ​မယ်။ သင်​ယူ​နေ​တဲ့​ဘာသာ​စကား​ကို​ပဲ ပြော​ပါ​မယ် လို့ ကိုယ့်​ဖာ​သာ​ကိုယ် စည်းကမ်း​ချ မှတ်​လိုက်​ပါ။ တတ်နိုင်​တယ် ဆို​ရင်​တော့ ဆရာ​နဲ့​လည်း ဆက်​သင်​ပါ။
ဒီ​အချိန်​မှာ ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို ပြော​တဲ့​အဖေါ်​ရှာ​ရ​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ နေ့​တိုင်း နာရီ​အနည်းငယ် ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို လေ့ကျင့်​နိုင်​ဖို့ ကြိုးစား​ပါ။ ဒီ​အချိန်​မှာ စကားပြော​အခြေ​ခံ​ကို ရ​သွား​ပြီ ဖြစ်​တဲ့​အတွက် ဒီ​လို​လေ့ကျင့်​မှု​ဟာ လုပ်​ရ​မဲ့ ငြီးငွေ့​စရာ​ကောင်း​တဲ့ အလုပ်​မဟုတ်​တော့​ပဲ သူငယ်ချင်း​တွေ​နဲ့ စကား​စ​မြည်​ပြော​ရင်း အချိန်​ကို ကုန်​လွန်​စေ​တဲ့ အခြေအနေ​မျိုး ဖြစ်​ပါ​လိမ့်​မယ်။
သင် သင်​ယူ​နေ​တဲ့​ဘာသာ​စကား​နဲ့ ရေးထား​တဲ့ လွယ်ကူ​တဲ့ စာအုပ်​တွေ​ကို ဖတ်​ကြည့်​ပြီး မ​သိ​တဲ့ စကားလုံး​တွေ​ကို မျဉ်းသား​ထား​ပါ။ ဒီ​စကားလုံး​တွေ​ကို သင့်​ရဲ့ ဝေါဟာရ / စကား​စု​စာအုပ်​ထဲ ရေး​ထည့် နိုင်​ပါ​တယ်။
စဉ်းစား​တဲ့​အခါ​မှာ​လည်း ဒီ​ဘာသာ​စကား​နဲ့ ပဲ​စဉ်းစား​သင့်​ပါ​ပြီ။ အတွေး​တစ်​ခု⁠ခု​ကို စကား​နဲ့ ဖေါ်​ပြ​တဲ့ အခါ သုံး​ရ​မယ့်​စကားလုံး​တစ်​ခု⁠ခု​ကို မ​မှတ်မိ​ပါ​က အဲ​ဒီ​စကားလုံး​ကို​လည်း ဝေါဟာရ စာအုပ်​ထဲ​ရေး​သွင်း လိုက်​ပါ။ တစ်​ရက်​ကို စကားလုံး /စကား​စု အလုံး (၃​၀) ကို​လည်း ဆက်​ပြီး ကျက်​မှတ်​သွား​ပါ။
(၆​၁) ရက် မှ ရက် (၉​၀)
ရက် ၆​၀ ရောက်​တဲ့​အခါ​မှာ​တော့ သင့်​အနေ​ဖြင့် ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို ပြော​နိုင်​တဲ့​အခြေအနေ​ဟာ တော်တော်​လေး ကောင်း​နေ​လောက်​ပါ​ပြီ။ ဆက်​ပြီး လေ့ကျင့်​ဖို့​ပဲ လို​ပါ​တယ်။ စကား​ပြောဖေါ်​တွေ​နဲ့ ပို​ပြီး လေးနက်​တဲ့​အကြောင်းအရာ​တွေ အကြောင်း​ပြော​ပါ။ တစ်​ရက်​ကို စကားလုံး အလုံး(၃​၀)ကို လည်း ဆက်​ပြီး ကျက်​မှတ်​ပါ။ ကိုယ်​တတ်​ပြီး​သား စကားလုံး​တွေ​ကို​လည်း မ​ပြတ်​လေ့ကျင့်​ဖို့ လို​ပါ​တယ်။ ဒါ​ဆို​ရင် စာလုံးပေါင်း အလုံး (၃​၀⁠၀​၀) ကို တတ်​သွား​မှာ ဖြစ်​တဲ့​အတွက် အဲ​ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို ချောမွေ့​သွက်​လက်​စွာ ပြော​နိုင် သ​လောက် ဖြစ်​သွား​မှာ​ပါ။
အခု​အချိန်​မှာ​တော့ ဒီ​ဘာသာ​စကား​နဲ့ ပြ​တဲ့ ရုပ်​မြင်​သံ​ကြား အစီ​အစဉ်​တွေ၊ စာအုပ်​တွေ​ကို စ​ပြီး​တော့ ကြည့်​နိုင်၊ ဖတ်​နိုင်​ပါ​ပြီ။ ဒီ​ဘာသာ​စကားပြော​တဲ့ DVD တွေ ငှား​ပြီး နားလည်​အောင် လိုက်​ကြည့်ပါ။ လို​အပ်​ပါ​က စာ​တမ်း​ထိုး​တဲ့ ခလုတ်​ကို နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ကြည့်​တဲ့​အခါ အဆင်​မ​ပြေ​သေး​ရင်​လည်း ကိစ္စ​မ​ရှိ​ပါ။ ဘာ​ကြောင့်​လဲဆို​တော့ ရုပ်​ရှင်​ကို နားလည်​အောင် ကြည့်​ခြင်း​က တစ်​ယောက်​ချင်း စကားပြော​ရ​တာ​ထက် ပို​ခက်​လို့​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
နေ့စဉ်​နေ့​တိုင်း ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို (၂)နာရီ (၃)နာရီ ခန့် ဆက်​လေ့ကျင့်​ပါ​က လ​ကုန်​တဲ့​အခါ ဒီ​ဘာသာ​စကား​ကို ကောင်း​ကောင်း နားလည်​သဘောပေါက်​လာ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ပြင်းထန်​တဲ့ အာရုံ​သာ ထား​နိုင်​တယ်​ဆို​ရင် ရက် ၉​၀ အတွင်း​မှာ အံ့ဩ​စရာ​ကောင်း​လောက်​အောင် သင်​ဖြစ်ထွန်း​မှာ ဖြစ်​ပါ​တယ်။
ယခု ပြော​ပြ​ထား​တဲ့ နည်း​လမ်း​တွေ​ကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာ (သို့) မည်​သည့် ဘာသာ​ကို​မ​ဆို သင်​ယူ​ရာ​မှာ အသုံးပြု​နိုင်​ပါ​တယ်။ အဓိက အချက်​ကတော့ ဇွဲ​ရှိ​ဖို့​နှင့် အချိန်​ပေး​သင်​ယူ​ဖို့​ပဲ ဖြစ်​ပါ​တယ်။ သင့်​မှာ​ရော အခြား​နည်း​လမ်း​ကောင်း​တွေ ရှိ​ပါ​လား။ ရှိ​ရင် အောက်​က comment box မှာ ရေး​ပြီး အခြား​သူ​များ​ကို လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​လို့ ပြော​လို​ပါ​တယ်။
Credit to British Council Myanmar
Next post အိမ်​၌ မ​ပြု-မ​ထား​သင့်​သော ရှောင်​သင့်​သော အရာ​များ
Previous post Sensōji ဗုဒ္ဓ​ဘာသာ​ဘုရား​ကျောင်း